Xog ku saabsna Kuran Maanta ka dhacay Madaxtooyada Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo, Ra’iisul Wasaare Rooble, Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada Galmudug, Koofur Galbeed, Hirshabelle iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa shir Maanta ku yeeshay Madaxtooyada Soomaaliya.
Shirkan oo qado ahaa ayaa Madaxweynuhu ku martiqaaday Madaxda ayaa looga hadlayay xaaladihii ka soo kordhay is mari waagii ka taagnaa doorashada oo shalay Xukuumadda ku dhawaaqday in la guda galayo hirgelinta doorashada si aan waqti kale u sii lumin.
Kulankaan ayaa xoogiisa ku yimid kaddib markii Madaxweyne Qoorqoor uu caddeeyay inuu fashilmay dadaaladii uu waday, isagoo eedda dusha ka saaray Puntland iyo Jubbaland.
Go”aankaas waxaa ka dhashay Muran xoogan oo ay qabaan Xubnaha Mucaaradka iyo sidoo Kale siyaasiinta soomaaliyeed
« Ra’isul Wasaare Rooble oo kulan la qaatay Haweenka Labada aqal ee Baarlamaanka.
Shir Deg Deg ah oo Caawa Muqdisho uga socda Mucaaradka iyo ….. »